Sida loo kaabta Data ku xirantay iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Sida loo kaabta Data ku xirantay iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
> Resource > iPhone > Sida loo kaabta Data ku xirantay iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Ilowday aan iPhone 6 Plus screen password qufulka!
Waxaan halmaamay sirta ah ee aan iPhone 6 Plus. Hadda badhanka qufulka waa la jebiyey, oo Lugood ma aha in uu aqoonsado. Tani iPhone 6 Plus ayaa loo isticmaali jiray muddo dheer, waxaana qabaa in la joogo waqtigii in wax laga beddelo si cusub iPhone 6 daray. Si kastaba ha ahaatee, waxaan leenahay badan oo xogta ku yaal iyo Badankoodna waa arrin muhiim ah. Ma jiraa wax aan dib kartaa xogta ka xiran iPhone 6? Fadlan ii soo sheeg haddii aad qabto talo wanaagsan. Thanks ka hor !!
Waa wax laga xumaado inaan maqlo in. Warka fiicani waxa weeye in aad haysato fursad ay dib ilaa xogta iPhone aad qufulan, si sax ah ku hadla, inuu ka soo kabsado xogta ka. Marka hore, waxaad u baahan tahay in la helo qalab kuu ogolaanaya in aad ka bogsato xogta ka iPhone qufulan. No fikrad ku saabsan? Halkan waa talo: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (for Windows users) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Mac) , kaas oo kaa caawin kara helitaanka aad iPhone, Falanqeynta ceshan xiriirada, fariimaha, sawiro, videos, qoraalada , wac taariikhda iyo waxyaabaha dheeraad ah oo ku saabsan aan Lugood. Labada barnaamijyada hadda si fiican u la macruufka 9 shaqeyn iyo taageero iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4 S, iPhone 4 iyo iPhone 3GS.
Download version maxkamad free soo kabashada xogta iPhone hoose si aad u leeyihiin isku day ah.
Fiiro gaar ah: The version daaqadaha taageertaa dambeeyay Windows 10, oo ka mid ah Mac ka taageertaa Yosemite. Labada iyaga ka mid ah oo weyn oo la shaqeeya oo dhan macruufka 9 qalabka.
Sidee in ay dib u kor xogta iPhone qufulan in tallaabooyinka
Next, aynu hubiyo sida in ay dib ilaa xog ku saabsan iPhone qufulan aan Lugood si faahfaahsan. Hagahan wuxuu ku salaysan yahay version Windows ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Haddii aad tahay user Mac ah, fadlan kala soo bixi version Mac ah. Hawlgalka ayaa waxaa la mid ah.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in kombiyuutarka
Burcad barnaamijka ka dib markii ay ku rakibidda, iyo xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka. Marka qalab aad waxa lagu ogaan karaa barnaamijka, waxaad arki doonaa suuqa kala muujiyay sida soo socota.
Tallaabada 2. Sawirka aad iPhone xogta ku yaal
Ha ka walwalin in aad ka Halmaamaan aad iPhone password qufulka shaashadda. Inta aad geli karto nidaamka, waxaad dib u heli kartaa macluumaadka aad ku yaal. Dadka isticmaala iPhone 4 / 3GS, waxaad bedelan kartaa in Advance Mode si aad u hesho baaritaan qoto dheer. Markaas raac tilmaanta in barnaamijka uu muujiyo in aad hoos ku jecel yihiin in ay bilaabaan aad ka baareyso iPhone qufulan (macruufka 9 taageeray):
Hay iPhone iyo riix "Start" button.
Saxaafadda Power iyo badhamada Home waqti isku mid ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi.
10 ilbiriqsi ka dib, sii daayo batoonka, Laakiinse ay xajiyaan haysta button Home for kale 15 ilbiriqsi.
Marka aad u sheegay in aad si guul leh ku soo gashay hab iskaanka ah, software si toos ah ayaa bilaabi doonta aad ka baareyso iPhone sida uu furmo suuqa hoos ku qoran.
Wixii iPhone 6s (Plus) / iPhone 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s dadka isticmaala, waxaad si toos ah guji kartaa "Start Scan" button on furmo suuqa ugu weyn ee ay u iskaan sida soo socota.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo dib ilaa xog ku saabsan qufulan iPhone
Marka sawirka dhameystiray, dhammaan xogta in software ka helay on your iPhone (macruufka 9 taageeray) lagu soo bandhigi doonaa qaybaha cad. Waxaad iyaga ku eegaan karo mid ka mid ah oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga oo dhan la badbaadiyo on your computer ka mid ah.
Xogta aad halkaas ka heli waxaa ku jira kuwa hadda jira ee aad iPhone iyo kuwa tirtiray ka iPhone dhawaan. Waxay leeyihiin midab gaar ah. Waxaad noqon kartaa badhanka dusheeda in "soo bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya" marka aad rabto in aad u kala sooci. Waxa kale oo aad ka daawan kartaa tutorial video hoose.
Fiiro gaar ah: Haddii wali weydiiyo in aad qortaa erayga sirta ah oo ay Dr.Fone ee macruufka, ha u cadhoon. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato Wondershare Dr.Fone in ay Gordhaw Kadhoofaan ma bedeli kartaa wax aad iPhone, oo ay ku jiraan gab sirta ah. Sidaas, waxa aan ku caawin doona in ay masixi sirta ah. Haddii aad synced qalab aad la Lugood dhawaan iyo Lugood xusuusan doono sirta ah. Sidaas, Wondershare Dr.Fone ee macruufka heli karaa qalab aad by u isticmaalaya. Of, uma baahnid in uu ordo Lugood on your computer marka aad isticmaasho Dr.Fone ee macruufka.
Haddii hagahan ma aha waxtar kuu, waxaad isku dayi kartaa in aad isticmaasho hab kabashada oo ka mid ah ka soo kabsado iCloud kaabta ay bixiyaan Wondershare Dr.Fone ee macruufka si aad u hubiso content ee aad gurmad iCloud. Marka aad karti shaqo gurmad aad iPhone, waxaa laga yaabaa in gurmad ah ahbaa si toos ah aad u.
Download version maxkamadda hoose si aad hadda leedahay isku day ah oo aad qufulan iPhone!
Sida loo Delete SMS, Photos, Apps, Options System on iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Biyaha Waxyeello iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Kalandarada on iPhone (6s iPhone mid)
3 Best iPhone Data Recovery Software 2015
Sida loo Delete Wax walba oo iPhone
Sida loo Raadi fariimaha qoraalka on iPhone
Sida loo Sida lagu Helo Music on iPhone aan Lugood
3 Siyaabaha Bedelka Xiriirada ka iPhone si iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan Gmail Xiriirada inay iPhone 5s, iPhone 4s, iPhone 5
Sidee si ay u gudbiyaan Photo Library ka iPhone in Computer